आलु खाने गर्नु हुन्छ ? खान नजाने विष खाए बराबर होला ! - एकदमै महत्वपूर्ण जानकारी - ज्ञानविज्ञान
आलु किन खाने, आलु खानुका ५ फाइदा
आलुका धेरैजसो परिकारहरु हामी मन पराउँछौ । बजारमा आलुको माग सदैव उस्तै हुन्छ । आलु एक सर्वसुलभ र सस्तो सब्जी तथा खाजा पनि हो ।
नेपालीका भान्सामा सबैभन्दा बढी उपयोग गरिने तरकारी पनि आलु नै हो । किनकी आलु जुनसुकै तरकारीमा मिसाएर खान सकिन्छ । साथै, यसको धेरै किसिमका परिकारसमेत बनाउन मिल्छ ।
आलु स्वास्थ्य र पोषणका दृष्टिकोणले समेत उपयोगी छ। के के छन्, आलुका फाइदा ?
१. माटो भित्र फल्ने आलुमा अत्यधिक पोषण तत्व रहन्छ । यसमा प्रशस्त मात्रामा भिटामिन र मिनरल्स पाइन्छ।
२. आलुमा भिटामिन, खनिज र एन्टि अक्सिडेन्ट लगायतका तत्व अधिक मात्रामा पाइन्छ । आलुमा पाइने एन्टि अक्सिडेन्टले क्यान्सर, मधुमेह, हृदय रोग लगायत पुराना रोगहरुमा समेत उपयोगी हुन्छ ।
३. यदि तपाईंमा रक्तचाप, प्रतिरोधात्मक शक्ति, पाचन प्रणाली लगायतका समस्या छन् भने आलुको सेवन निकै उपयोगी मानिन्छ।
४. आलुमा प्रशस्त स्टार्चको मात्रा हुने भएकाले यसले रगतमा इन्सुलिनको मात्रालाई कन्ट्रोल गर्छ । र ब्लड सुगर हुने खतरा घटाउँछ ।
५. आलुको नियमित सेवन गर्ने ब्यक्तिलाई ग्यास, कब्जियत, पेट दुख्ने लगायतका रोगको जोखिम कम हुन्छ।
आलु पछाडि लुकेको तपस्या :
नेपालीले यति धेरै आलु खान्छन् कि, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष करिव ७५ किलो आलु खान्छन् । दक्षिण एसियामा आलु खानेमा नेपाल अग्रणी छ । नेपालमा यति धेरै आलु खपत हुन्छ, तर, उत्पादन चाहिँ कसरी हुन्छ ? कहाँ हुन्छ ?
नेपालीले जति आलु खान्छन् त्यसको करिव १० देखि १२ प्रतिशत आलु भारतबाट आयात हुन्छ, करिव ८८ देखि ९० प्रतिशत नेपालमै फल्छ ।
वरिष्ठ आलु वैज्ञानिक शम्भु प्रसाद धितालको सम्झनामा ३० वर्ष अघि नेपालमा करिव एक लाख ५० हजार हेक्टरमा आलु खेति हुन्थ्यो र वार्षिक करिव १५ लाख टन फल्थ्यो । अहिले एक लाख ८५ हजार हेक्टरमा खेति हुन्छ र वार्षिक करिव २६ लाख टन फल्छ ।
अर्थात्, तीस वर्ष यता आलुको उत्पादकत्व करिब दोब्बर भएको छ । निश्चित क्षेत्रफलको जमिनमा पहिले कति फल्थ्यो र अहिले कति फल्छ भन्ने नै उत्पादकत्व हो । ३० वर्षमा आलु खेति हुने जमिन करिब ३५ हजार हेक्टर बढेको छ ।
यति धेरै आलु फल्नुमा मुख्य दुई पक्ष छ । पहिलो पक्ष हो– किसानको महेनत । दोस्रो पक्ष हो– धेरै फल्ने आलुको विकासमा समर्पित वैज्ञानिकहरु र कृषि सम्वन्धी सरकारी निकायहरुको तपस्या ।
आलु उत्पादन बढाउन तपस्या गर्ने एउटा निकाय छ । त्यो निकाय हो– नार्क अन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय आलु बाली अनुसन्धान कार्यक्रम । त्यो निकायमा तपस्या गरेर बसिरहेछन् वैज्ञानिकहरु ।
ती वैज्ञानिकहरुले गरेको तपस्याको कमाल हो– अहिले हामीले खाइरहेको आलु । त्यस्ता वैज्ञानिकहरुमध्ये एक हुन् शम्भुप्रसाद धिताल ।
तपस्याको थालनी ०२९ मा राष्ट्रिय आलु बाली विकास कार्यक्रमको स्थापना भएपछि हुन्छ । नेपालमा आलुका लागि हावापानी निकै अनुकुल भएपनि कृषकलाई कस्तो आलुको विउ लगाउँदा कति उत्पादन हुन्छ ? कस्तो आलुलाई बजारीकरण गर्न सकिन्छ ? यस्ता कुराको हेक्कै थिएन । कृषि वैज्ञानिकलाई पनि आफ्नो देशको आलु बारे थोरै मात्र ज्ञान थियो ।
नार्कले आलुमा अनुसन्धान गर्न बाबुकाजी भुमी, डा जनकदेव शाक्य र ज्ञानप्रसाद राईको नेतृत्वमा एउटा टोली गठन बनायो । ०३७ सालबाट आलुको प्रारम्भिक अनुसन्धान सुरु भयो । भारत र पेरुबाट नमूना आलु नेपाल ल्याइयो । तर ०४८ सालमा नार्कको स्थापनापछि आलु बारे वैज्ञानिक अनुसन्धानले नयाँ उचाई लियो ।
नमूना आलुलाई प्रयोगशालामा राखियो । ल्याबभित्र आलुको विकास गर्न थालियो । त्यहाँ आयातित आलुको मात्र परीक्षण भइरहेको थिएन, नेपालकै रैथाने प्रजातिका आलुको पनि अध्ययन भइरहेको थियो ।
ल्याबमा आलुको जीवन
हामीले अहिले खाइरहेको आलुको पुर्खा यिनै वैज्ञानिकहरुले ल्याबमा हुर्काएका हुन् । उनीहरुले भविष्यको नेपालका लागि ती आलुहुर्काइरहेका थिए ।
प्रारम्भिक अनुसन्धान सुरु भएको तीन वर्षपछि सो अनुसन्धान टोलीमा अर्का वैज्ञानिक थपिए– डाक्टर शम्भु प्रसाद धिताल । २०४० सालमा लोकसेवा परिक्षा उत्तिर्ण गरेर शम्भु नार्कमा आवद्ध भएका थिए ।
पहिला पाँच जनाको टोली थियो । पछि शम्भु समेत थपिएका थिए । ललितपुरको खुमलटारमा टोलीले आफ्नो अनुसन्धान केन्द्र राखेको थियो । ६ जनाको टोली एकढिक्का भएको थियो ।
तर, विज्ञहरुको अभाव खट्कयो । उनीहरु सिमित संख्यामा थिए । विभिन्न विषयमा अध्ययन गर्ने विज्ञ नै नेपालमा थिएनन् । फेरी टोलीलाई भौतिक पूर्वाधार र आधुनिक प्रयोगशालाको पनि अभाव रह्यो ।
दक्षिण कोरियाको आलु
वैज्ञानिक टोलीका कान्छा सदस्य शम्भु प्रसाद धितालले दक्षिण कोरियामा ‘आलु’को विषयमा विद्यावारिधि र महाविद्यावारिधि सकेका थिए । उनले त्यहाँको अनुसन्धान देखेका थिए । आफ्नै देशको आलुमा भने खासै प्रगति हुन सकेको थिएन ।
तर टोलीलाई एउटा कुराले निकै प्रेरणा दिइरहेको थियो । दक्षिण कोरियामा शम्भुले आलुको उत्पादन राम्रो भएको देखेका थिए । आलु खेतिले आर्थिक रुपमा सम्पन्न बनाएको परिवार देखेका थिए ।
त्यसैले आलुका थप जात नेपालमा पनि विकास हुनुपर्छ । नेपालीले अरु जातका आलुपनि खान पाउनुपर्छ । आलुको अनुसन्धान हाम्रै टोलीले गर्नुपर्छ । आलुको उन्मोचन हाम्रै पालामा हुनुपर्छ भन्ने जस्ता कुराले शम्भु र टोलीलाई प्रेरणा दिन्थ्यो ।
शायद यसैको उपज हो– ०३७ बाट थालिएको अनुसन्धान १२ वर्षपछि अर्थात् ०४९ सालमा आएर सफल भयो । यसैबीच ०४८ मा आधुनिक प्रयोगशालाको स्थापना समेत भएको थियो । नेपाली वैज्ञानिकले थरिथरिका आलुका प्रजातिको विकास गरे । उन्नत जातको आलुको बिउ विकास गरे । १२ वर्षको बीचमा तीन जातका आलु विकास भयो ।
त्यहि अनुसन्धानको उपज हो, हामीले मीठो मानि खाने डेजिरे, कुफ्रीज्योती, कुफ्रीसुन्दरी, खुमल सेतो, खुमलरातो खुमलउज्वल, खुमलविक्रम, जनकदेव, आईपि वाई ८ जातका आलु । ‘जनकदेव’ नामको आलु टोलीकै सदस्य जनकदेव शाक्यको नाममा राखिएको हो । केही जातको आलुको नामको अगाडि रहेको ‘खुमल’ नाम चाहिँ अनुसन्धान केन्द्र रहेको ठाउँ खुमलटारबाट लिइएको हो ।
यस्तो महान काम गर्ने वैज्ञानिक टोलीका महत्वपूर्ण सदस्य अर्थात् उनै डा. शम्भुले अबको तीन महिना पछि नार्कबाट अवकाश पाउँदैछन् । आलुको विकास गरेर नेपाल र नेपालीको सेवा गरेका अन्य सदस्यहरुले पहिले नै अवकाश पाइसकेका छन् ।
नार्कमा आलुसँग धितालले ३५ वर्ष बिताइसके । आलुको बिउ तथा बाली विकासको क्षेत्रमा यस बीच ठूलो प्रगति भइसकेको छ । धिताल भन्छन्– ‘दक्षिण कोरिया पढेर आएपछि नेपालमा आलुको उत्पादकत्व प्रति हेक्टर जति थियो, अहिले दोब्बर भएको छ ।’
यो ३५ वर्षमा धिताल र उनको टिमले १२ वटा जातको उन्मोचन गर्यो । दुई जात सिफारिस गर्याे भने अन्य तीन जात सिफारिस हुने क्रममा छ ।
३५ वर्ष अघि र आजको नेपालमा आलु खेतिको अवस्थामा के फरक छ ? धिताल भन्छन्– ‘नेपालमा आलु खेतिमा व्यापक परिवर्तन आएको छ । रोगव्याध कम लाग्न थालेको छ । व्यवसायिक खेतिमा बढोत्तरी भएको छ । बिउ आलु उत्पादन बढेको छ । समग्रमा भन्दा किसान लाभान्वित भएका छन् ।’
नेपालले यस बीचमा विभिन्न जातका विदेशी आलु भित्रायो र त्यसलाई नेपाली माटो र हावापानी अनुकूल बनायो । अहिलेसम्मको सबैभन्दा सफल आलुको प्रजाति जनकदेव, डेजिरे र कुफ्रिज्योती.हुन् ।
यी आलु किन सफल भए ? धिताल भन्छन्– ‘धेरै फल्ने, कम रोग लाग्ने र नेपालका लगभग सबैजसो क्षेत्रमा हुने भएकाले सफल भयो ।’
आलुमै अर्काे विकास
पछि शम्भुकै पहलमा पानीमा आलु खेति गर्ने नयाँ प्रविधि नेपालमा विकास भयो । नेपालमा उनी नै पहिलो वैज्ञानिक बने, पानीमा आलु खेति गर्ने ।
पानीमा फल्ने आलुको जातबाट एक पटक लगाएको वालिबाट तीन पटक आलु टिप्न सकिन्छ । माटोमा भन्दा तीन गुणा बढि फल्छ र तीन गुणा धेरै आम्दानी हुन्छ । अहिले सयौं किसान र प्राविधिक यो प्रविधि सिकिरहेछन् ।
तर, आलु फलाउनु मात्र सफलता होइन भन्ने थाहा थियो, शम्भुलाई । किसानहरु यसै त आलु कम फलेर तनावमा थिए । झन् अनेक थरिका रोग लागेर बारीमै आलु नष्ट हुन थालेपछि, किसान मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा पुग्थे । आलु खेति गर्ने किसान ‘डढुवा’ रोग भनेपछि त झन् भयभित हुन्थे ।
धेरै ठाउँमा आलुबाली सखाप भएको थियो । पछि शम्भुकै टोली खटियो डढुवा रोग विरूद्ध । अनुसन्धान भयो । रोगको निदान पत्ता लाग्यो । अब डढुवा रोग लाग्ने समस्या नियन्त्रणमा आयो ।
शम्भु भन्छन्, ‘मैले जीवनमा कमाएको भनेको तिनै किसानको आशिर्वाद हो । जुन अर्वाैं रुपैयाँको सम्पत्तिभन्दा ठूलो छ ।’
हरेक वर्ष नेपालमा मौसममा केही परिवर्तन आउँछ । नयाँ मौसम र हावापानीले आलुमा नयाँनयाँ रोग लाग्छ । शम्भु र उनको टोली हरेक वर्ष यो समस्यासँग जुध्न लागिपर्छ ।
यो वर्ष पनि टोली डढुवा रोगकै रोकथामका निम्ति पूर्वको झापादेखि पश्चिममा धनगढीसम्म पुग्यो ।
तर अब शम्भुले नार्कबाट अवकाश लिने बेला आइसकेको छ । तैपनि उत्तिकै समर्पण साथ काम गरिरहेछन् ।
उनलाई अरु कुराको त चिन्ता छैन । तर नार्कमा भएका कृषि वैज्ञानिकहरु धमाधम अवकास हुने क्रम बढेको र नयाँ पुस्ताका वैज्ञानिकहरुले नेपालमा काम गर्न रुचि नदेखाएको देख्दा चाहिँ मन भतभती पोल्छ ।
‘हिजो जस्तो लाग्छ, म यो सेवामा प्रवेश गरेको । तर अनुसन्धनको क्रममा समय बितेको पत्तै नहुने रहेछ । जति काम गर्दै गयो, उति सन्तुष्टि पाइने रहेछ । यो सेवा छोड्न त मन छैन, तर बाध्यतावस तीन महिनापछि मैले छोड्नै पर्छ’, भावुक हुँदै उनले भने ।
शम्भुको एउटा ठूलो इच्छा थियो रे । आफ्नै पालामा नेपाललाई आलुमा आत्मनिर्भर बनाउने । तर आत्मनिर्भर त परको कुरा सकि नसकि किसानले दुःख गरेर उब्जाएको आलु कहिले मूल्य नपाएर त कहिले अनेक रोग लागेर नष्ट भएको देख्दा शम्भु निकै दुःखी हुन्छन् ।
नेपाललाई आलुकै देश भन्दा पनि हुन्छ । आलु उत्पादन गर्ने क्षमताका दृष्टिले नेपाल विश्वको २४ औं स्थानमा छ । एसियामा पाँचौं स्थानमा छ । तैपनि हरेक वर्ष करिव पाँच अर्ब रूपैयाँको आलु आयात हुन्छ । नेपाली आलुको बजार करिव ५१ अर्व रुपैयाँ हाराहारी छ ।
‘अझ भारतबाट आएका व्यापारीले नेपालको उच्च पहाडी क्षेत्रबाट वर्षेनी आलुका बिउ लैजान्छन् अनि हामी वर्षेनी भारतबाट अर्वाैं रुपैयाँको आलु आयात गर्छाैं’, उनले भने ।
नेपालमा परम्परागत तरिकाले खेति हुन्छ । आलुको व्यवसायिकरणका राम्रो छैन । तर शम्भु अठोट कसेर बसेका छन् । उनी तीन महिना नै किन नहोस्, नेपाललाई आलुमा आत्मनिर्भर गराउने काममा निरन्तर खटिने योजनामा छन् ।
अहिले प्रविधिको उच्चतम विकासले गर्दा पहिलेजस्तै एक विषयमा अनुसन्धान गर्न १२ वर्ष लाग्ने अवस्था छैन । पाँच वर्षमै आलुको क्षेत्रमा व्यापक अनुसन्धान गर्न सकिने अवस्था छ । तर शम्भुको एउटा कामना छ– यो तीन महिनामै नेपाल आलुमा आत्मनिर्भर हुने गरी कुनै प्रविधिको विकास भइदियोस् !
विश्वभरि एक हजार जातका आलु पाइन्छ । नेपालका रैथाने आलु करिव ७० वटा छन् । नार्कको ल्याबमा करिव एक सय ५० जातका आलु संरक्षित छन् । उपभोक्ताले करिव २० वटा जातका आलु उपभोग गर्छन् । ती मध्ये १२ वटा जातका आलु शम्भु र उनको टोलीले विकास गरेको हो ।
र यहि हो, आलुमा लुकेको तपस्याको कथा ।
Don't Miss it इज्जत कमाउन सिक्नुहोस, पैसाले त मात्र तपाईको भौतिक सुख मात्र पुरा गर्दछ
Up Next परिवार संग जति धेरै समय बितायो त्यति बढी फाईदा – एकपटक अवश्य पढ्नुहोस् है
मौरीकाे मह खाँदा कस्ता कस्ता कुरामा फइदा पुग्दछन् त ? यस्ताे महत्त्वपुर्ण जानकारी जानिराखाैँ
मौरीहरूले विभिन्न प्रजातिका वनस्पति -जडिबुटीसहित) हरूको फूलमा भएको रसलाई सङ्कलन गरी तयार पार्ने तरल वस्तुलाई मह भनिन्छ । फरक मौसममा…
कस्तो अवस्थामा हाडे बदाम खानु हुदैन ? जानिराख्नुहोस
हाडे बदाम एक मसलाको प्रकार हो जुन खानमा स्वादिष्ट हुनुका साथै हाम्रो शरीरका लागि पनि फाइदाजनक हुन्छ । हाडे बदाममा…
सील प्याक गरिएको खानेकुरा खानुहुन्छ ? खासगरी महिलाले यस्तो खतरनाक समस्या झेल्नु पर्छ
बजारमा पाईने हरेक बस्तुहरु चाहे त्यो कस्मेटिक उत्पादकसंग जोडिएको होस या खानेकुरासंग जोडिएका कुराहरु हुन्, हामी ती बस्तुहरुमा सजिलै विश्वास…